जसपामा विश्वासको संकट : सबै निर्णयमा तीनजना नेताको हस्ताक्षर अनिवार्य | Axiskhabar
जसपामा विश्वासको संकट : सबै निर्णयमा तीनजना नेताको हस्ताक्षर अनिवार्य
फाल्गुन २१, २०७८, ३:३९ PM
काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी नेपालका शीर्ष नेताहरूमा एक अर्काप्रति अविश्वास बढ्दो छ । यही अविश्वासका कारण पार्टीले गरेका निर्णयहरू समेत सार्वजनिक हुन सकेका छैनन् । पछिल्लो समय पार्टीले कुनै पनि निर्णयमा तीनजना नेता जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, संघीय परिषद्का अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई र वरिष्ठ नेता अशोक राईले हस्ताक्षर नगरेसम्म त्यो सार्वजनिक नगर्ने नीति बनाएको छ । पार्टीमा नेतृत्वका लागि विवाद भइरहेको छ । त्यसैले अध्यक्ष यादवले गर्ने निर्णयहरूप्रति अध्यक्ष भट्टराई पक्षका नेताहरूले शंकाको दृष्टिले हेरिरहेका हुन्छन् ।
पछिल्लो समय पार्टीका अध्यक्ष यादवले भएका निर्णयहरू लुकाउने र नभएका निर्णयहरू सार्वजनिक गरिदिने जस्ता काम गरेको आरोप भट्टराई पक्षका नेताहरूले लगाएका छन् । माइन्युट बुक हेर्दा जथाभाबी निर्णयहरू भएको, त्यसमा उपस्थिति मात्र देखाइएको तर हस्ताक्षर नभएका निर्णयहरू पनि त्यसमा उल्लेख भएको, अध्यक्षको मात्र हस्ताक्षर देखिएको कारण आशंका उब्जिएको भट्टराई पक्षका नेताहरूको आरोप छ ।
त्यही भएर अबदेखि हुने कुनै पनि निर्णयमा तीनजना शीर्ष नेताहरूको हस्ताक्षर अनिवार्य बनाइएको छ । निर्णयमा तीनजनाले हस्ताक्षर गरेपछि मात्र त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने सहमति गरिएको छ । अब माइन्युटमा उपस्थित हुने सबैको हस्ताक्षर हुनुपर्नेछ । उनीहरूको उपस्थितिमा निम्न एजेण्डामाथि छलफल गरी निर्णय भएको भनेर माइन्युटमा उल्लेख गर्नुपर्छ । निर्णय लेखिसकेपछि अन्त्यमा सम्भव भए त्यहाँ उपस्थित सबै जनाको हस्ताक्षर नभए तीन जनाको हस्ताक्षरलाई अनिवार्य बनाइएको छ ।
Previous articleयुक्रेन युद्धका ‘गोस्ट अफ किभ’, जसले थुप्रै रुसी लडाकु विमान खसाले !
Next articleपार्टी भित्रको अन्तरविरोध हल गर्न ‘व्याख्यात्मक घोषणा गर्ने माओवादीको तयारी